Kusho Ukuthini Ukuphupha Uxabana Nomama Wakho Leliphupho elinjena sengilizwe izikhashana eziningi futhi kubantu abahlukene. Abanye esengike ngabacacisela lona bese bebe nalo iminyakanyaka. Lifike libuye linyamalale kodwa libuye emva kwesikhashana Umama wakho wuyena umzali obaluleke kakhulu uma ngabe sekuza ngasekufundisekeni kwakho izinto eziningi zempilo. Ikakhulukazi yibona omama abanye basiqoqe ngokweziyalo empilweni. Ekuzalweni nje kwakho umama wakho… Read More »
Ake sikuthi nje fahla ngazo izithakazelo zakwa Mthembu, phela laba abafundile ke bona sebathi Mthembu clan names. Noma ungakuqhamukela ngakuphi futhi kanjani kodwa konke nje kusho into efanayo. Mvelase,Qhudeni Mvelase,Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,Mvelase kaGuda,Ongawadl’amathibani,Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,Mnisi wemvula ilanga libalele,Ngoz’ovel’eNyandeni,Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,Nina baseMlamlankunzi! Asibinge nje ngokusivakashela la, ungagcini nje kanje kodwa uhlabe umkhosi nakwabanye bakwa Mthembu… Read More »
Mncwango Clan Names – Izithakazelo Ake sikuphe izithakazelo zakwa Mncwango abanye bethi nje Mncwango clan names ngolimi lwesilungu. Zihamba kanjena ke ezakwa Mjaji Mpangazitha Mjaji ka Ngotshana, Makhumbuza uthuli, Nsiba ka Muntsha, Dubeni, Wena owanyela emfuleni wenkosi wathi uyancwanga, Mpangazitha oziphangayo, Mzingeli kaMfekaye, Mncumbatha, Phakathi wako nkosi, Uma kukhona obona sengathi sikuvalele ngaphandle okubalulekile mayelana… Read More »
Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Kusho Ukuthini
Kusho Ukuthini Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Kuthiwa akekho umuntu omthola engenaye umuntu anaye empilweni yakhe. Lokhu kuyafana nje noma owesilisa noma owesifazane. Yikho ke lokhu okuyaye kudale ukuthi uma senindawonye kube knona abantu abangayithandi leyonto yenu ukuthi iphumelele. Ukuphupha Uxabana Nomuntu Wakho Uma uphupha uxabana nomuntu wakho kufanele impela ukhathazeke. Noma ngabe inxabano yenu ivela… Read More »
Category: Izincazelo Zamaphupho
Ukuphupha Ulwa Kusho Ukuthini
Kusho Ukuthini Ukuphupha Ulwa? Ukuphupha ulwa uma kuza noma kukufikela ephusheni akuyona into enhle ngakho ke kufanele ulibhekisise leliphupho ukuthi lichazani. Kubalulekile ukuthi wazi ubulwa nobani noma nami ngesikhathi uphupha. Kungaba umuntu obulwa naye kodwa futhi kuyenzeka kube yisilwane njengenja noma inkomo. Ithini Incazelo Yaleliphupho? Njengoba sesishilo, kuya ngokuthi ubani lowo ophuphe ulwa naye. Incazelo… Read More »